စမတ်ဖုန်း မုန်တိုင်းသစ် တိုက်ခတ်စေခဲ့သူ (သို့) ရှောင်းမီဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်က လေကျွင်း | dawnmanhon
တရုတ်တို့ ရဲ့နည်းပညာခေတ်မှာ ရှောင်းမီ နဲ့ အလီဘာဘာက အံ့သြဖွယ်ရာ နှစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အလီဘာဘာကို တည်ထောင်သူ ဂျက်မား အကြောင်းကို လူသိ ပိုများပါတယ်။ ရှောင်းမီကို တည်ထောင်သူ လေကျွင်းကို သိပ်မသိကြဘူး။ ဂျက်မားနဲ့လေကျွင်းဟာ တရုတ်လူငယ်တွေရဲ့အိမ်မက်ထဲက စီးပွားရေး အိုင်ကွန် နှစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
လေကျွင်းကို ၁၉၆၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ဟူပေ ပြည်နယ် မှာမွေးပါတယ်။ ၁၉၈၇ မှာ အထက်တန်းပြီးတယ်။ ဝူဟန် ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်တက်တယ်။ ၁၉၉၁ မှာ ကိုယ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ စတည်ထောင်ရာမှ အရင်းပြုတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ၁၉၉၂ မှာ လေကျွင်းဟာ King Soft အမည်ရှိ Anti Virus ရေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ကုမ္ပဏီမှာ အစမ်းခန့်အောက်ခြေ ဝန်ထမ်း စလုပ်ပါတယ်။ သူဟာ အလုပ်ကြိုးစားပြီး သင်ယူမှု အလွန်မြန်တယ် ဆိုတယ်။ တပတ်ကို နာရီ ၁၀၀ အထက် အလုပ်လုပ်တယ်။ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးကြောင့် ၂ နှစ် အကြာမှာ ကုမ္ပဏီရဲ့အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာတယ်။ နောင် ၄ နှစ်အကြာ ၁၉၉၈ မှာ ကုမ္ပဏီရဲ့ စီအီးအို အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရတယ်။ ၆ နှစ်အတွင်း အောက်ဆုံး ဝန်ထမ်းကနေ စီအီးအို ဖြစ်ခဲ့တာက အံ့သြဖွယ် သူရဲ့အရည်အသွေးပါပဲ။
၂၀၀၀ ခုနှစ် မတ်လမှာ King Soft ရဲ့စီအီးအို တာဝန် ယူထားရင်း Joyo. com ဆိုတဲ့ အင်တာနက် စာအုပ်ဆိုင်ကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း အဖြစ် ပြန် တည်ထောင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်း အောင်မြင်သွားပြီး ၄ နှစ်အကြာမှာ Joyo ကို Amazon ကုမ္ပဏီသို့ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းနဲ့ ရောင်းချလိုက်တယ်။ ဒီကစပြီး လေကျွင်းဟာ တရုတ် မီလီယံနာ တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။
King Soft ကုမ္ပဏီဟာ လေကျွင်းကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ၁၉၉၈ ထဲက စီအီးအို ရာထူးပေးခဲ့သလို ၂၀၀၁ မှာ ဥက္ကဌ ရာထူးပါ ပူးတွဲခန့် အပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Joyo ကိုရောင်းချပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တစ်ခု ထပ်တည်ထောင်ဖို့ ဆန္ဒ ပြင်းပြနေတဲ့ လေကျွင်းကို သူတို့ထိန်းသိမ်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ၂၀ မှာ လေကျွင်းဟာ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် နဲ့ဆယ်နှစ်နီးပါး လုပ်ခဲ့တဲ့ စီအီးအိုနဲ့ ဥက္ကဌ ရာထူးက နှုတ်ထွက်ပါတယ်။ လေကျွင်းဟာ ဒီနေ့ထိ King Soft ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ပါသေးတယ်။
၂၀၀၈ မှာ လေကျွင်းဟာ သူရဲ့ ငွေတွေနဲ့တရုတ် နာမည်ကျော် (UC Browser) ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ မိုဘိုင်း အင်တာနက် ကုမ္ပဏီ UCWeb နဲ့ Vancl. com မှာ စတင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်။ မကြာခင် UCWeb ရဲ့ဥက္ကဌ တာဝန် ယူတယ်။ လေကျွင်းရဲ့အိမ်မက်တွေဟာ ဒီလောက်နဲ့မရပ်တန့်သွားသေးပါဘူး။ King Soft မှာ အလုပ်လုပ်စဉ် ထဲက နိုကီရာ၊ မိုတိုရိုလာ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းအရ ပတ်သတ်ခဲ့ပြီး စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ကို စိတ်ကူးယဉ် ခဲ့ပါတယ်။ အလျင်အမြန် ကြီးထွားလာတဲ့ ဒီဈေးကွက်ကို ရယူဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး နည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်ပါတယ်။
၂၀၁၀ လေးလပိုင်း မှာတော့ သူငယ်ချင်း ၈ ယောက်နဲ့ရှယ်ယာစုပြီး ရှောင်းမီကို စတင် တည်ထောင်တယ်။ ဒီတည်ထောင်ခြင်းဟာ အာရှရဲ့စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ နည်းပညာလောကထဲကို မုန်တိုင်း တစ်ခု စတင် ဝင်ရောက်လာခြင်း လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရှောင်းမီတည်ထောင်ပြီး တစ်နှစ်နဲ့ငါးလ အကြာ မှာ သူတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်တဲ့ Mi1 ကို စထုတ်ပါတယ်။ ပန်းသီးဘုရင် စတိပ်ဂျော့ရဲ့နောက်ဆုံး လက်ရာ iphone 4S နဲ့အပြိုင် တရုတ် ဈေးကွက်ထဲ စပို့ တယ်။ 4S က ဒေါ်လာ ၇၉၀ ရောင်းတဲ့ အချိန်မှာ Mi1 ကို ဒေါ်လာ ၃၂၀ နဲ ရောင်းပါတယ်။ အိုင်ဖုန်း နဲ့ အရည်အသွေး တူတဲ့ ဖုန်းကို ဈေးတဝက်ပဲပေးပါ ဆိုပြီး နည်းပညာဘီလူးကြီးကို နားရွက် တံတွေး စစွတ်ပါတယ်။ ဒီကနေ စပြီး ရှောင်းမီ ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှု အပြင်းထန်ဆုံး စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ထဲကို ခုန်ဝင် လာပါတယ်။ စတိပ်ဂျော့ ကွယ်လွန် သွားတဲ့အခါ လေကျွင်းကို ဒုတိယ စတိပ်ဂျော့ အဖြစ် တင်စားကြပါတယ်။
– ၂၀၁၁ မှာ တရုတ်ရဲ့၂၀၁ ယောက်မြောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာတယ်။
– ၂၀၁၂ မှာ တရုတ် ထိပ်တန်း လုပ်ငန်းရှင် ၁၀ ယောက်ထဲ ပါလာတယ်။
– ၂၀၁၃ မှာ ဖော်ကျွန်း မဂ္ဂဇင်းရဲ့ဂုဏ်ယူ အထိုက်ဆုံး လုပ်ငန်းရှင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတယ်။
– ၂၀၁၃ မှာ အာရှကို ချုပ်ကိုင်မယ့် လုပ်ငန်းရှင် ၁၁ ယောက် စာရင်းမှာပါလာတယ်။
– ၂၀၁၄ မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု ၉.၉ ဘီလီယံနဲ့တရုတ် နံပတ် ၈ ဘီလီနာ ဖြစ်လာတယ်။
– ၂၀၁၄ မှာ ဖို့ဒ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့တနှစ်တာ စွန့် ဦး လုပ်ငန်းရှင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံ ခဲ့ရတယ်။
– ၂၀၁၅ ဇူလိုင်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု ခန့် မှန်း ၁၃.၃ ဘီလီယံနဲ့တရုတ် နံပါတ် လေး၊ ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၈၇ ယောက် မြောက် အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်လာပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း သုံးစွဲမှု ပေါက်ကွဲချိန်မှာ ဈေးကွက် လိုအပ်ချက် ကွက်လပ် တစ်ခု ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အနောက်နိုင်ငံနဲ့ ဂျပန် ဖုန်းတွေဟာ အရည်အသွေး ကောင်းပေမယ့် ဈေးများတယ်။ တရုတ်ဖုန်း ကျတော့ ဈေးပေါပြီး အရည်အသွေး ညံ့တယ်။ ဒီနှစ်ခုကြားထဲက “အရည်အသွေးကောင်း ဈေးသက်သာ” ဆိုတဲ့ ကွက်လပ်ကို ရှောင်းမီက ဖြည့်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် တဟုန်ထိုး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော် အချိန်မှန် နေရာမှန် ယူမိလို့ ပါ။ မုန်တိုင်း အလယ်ထဲ ဝင်သွားမှတော့ ဝက်တောင် ပျံလို့ရပါတယ်” တဲ့။
dawnmanhon: စမတ်ဖုန်း မုန်တိုင်းသစ် တိုက်ခတ်စေခဲ့သူ (သို့) ရှောင်းမီဖုန်းရဲ့ နောက်ကွယ်က လေကျွင်း